EA014 - OMG Mkpu Ọpụpụ Ikuku OMG maka Home (Mgbochi Mgbochi Agadi) - S $ 380 - OMG Solutions
Enweghị mkpọtụ n'ime ụlọ! Tinye ebe nkwụsị na-enweghị ntụrụndụ na-adị jụụ ebe ị chọrọ ya
Kpochapụ mkpọtụ n'ime ụlọ - Quiet Fall Prevention.
The "New Patented Technology" Ngwaọrụ Wireless Fall Monitor nwere ike ibudata site na ndị bed bed (mkpuchi bedless). Nyocha nwere ike tinye n'elu bed nke na-ebelata mkpọtụ ụda na nso ndị isi obodo na TamperProofs nke nyocha ahụ ka onye obibi ahụ ghara ịtọgharịa ya n'onwe ya. Enwere ike tinyekwa nyochaa na paseeji nke na-ebelata mkpu ụda olu. Ọ dị nchebe n'ihi na ọkụ na-egbukepụ egbukepụ ọkụ na-akpọsa ndị na-elekọta ya na mkpuchi dị jụụ na paseeji nke na-agwa ha mgbe onye obibi na-ebili.
Patented nchebe atụmatụ
Nke a bụ ihe ndị anyị ji achọpụta ihe na-eme ka ndị na-elekọta anyị ghara ịma nke ọma ma ọ bụrụ na mgbaàmà ahụ efunahụ ma ọ bụ nyocha nke ikuku na-adịghị na ya. Enwere ike idozi ya n'èzí ụlọ ime ahụ maka ngwọta dị jụụ!
Enweghị eriri dị n'agbata mgbidi na ikuku na-enweghị isi
Ndị nlekota nchịkwa na nkwụnye ụda na-ejide onwe ha na-eme ka a ghara ịdaba na-enyere aka belata nkwụsịtụ na nkwụsị. A na-etinye eriri sensọ na-enweghị onwe ya n'okpuru onye bi. Mgbe onye obibi ahụ na-arị elu ma wepụ ihe nrụgide ahụ na mpe mpe akwa, a na-eziga mgbaàmà eletrik na mkpuchi mkpuchi na paseeji, na-eme ka onye na-elekọta ya mara.
OMGTL-2100G wireless Fall Monitor na-egosi na a na-enweta mgbaàmà site na ihe nkwụnye ihe mmetụta na usoro ahụ dị mma. Ọ bụrụ na mgbaàmà mgbaàmà sensọ gbajiri ma ọ bụ pụọ n'èzí, nyochaa mkpuchi ma gosi mgbaàmà efu.
Na-arụ ọrụ abụọ na otu oge
Jiri igwe ikuku na-ejighi nwayo na-eji ihe ndina nke ihe ndina; oche oche oche oche oche; nrụgide na-achọpụta ihe dị n'elu ala; ada ụda ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya.
Nyocha nwere ike ịrụ ọrụ abụọ na otu oge ma ọ bụrụ na achọrọ.
AJỤ - Ibu olu zuru oke.
Enweghị eriri dị n'etiti mbadamba na monitors - belata ihe egwu na-ebute ma kpochapụ ụdọ eriri akwa ma ọ bụ eriri.
Akwụkwọ Patented Pad Signal Lost notification - onye na-elekọta onye nlekọta ma ọ bụrụ na njikọ dị n'etiti ihe mgbochi sensọ na nyocha na-apụ.
Nhọrọ Ntọala: Onye na-elekọta isi nwere ike ịtọgharịa nyocha ahụ na Patented, Caregiver Key ™ nke Tamperproofs nyocha.
Enweghị mgbanyụ Nchedo: Onye na-elekọta nwere ike ghara ichefu iji tụgharịa anya
Ntọala onwe-ya mgbe nrụgide na-etinye aka na mpe mpe akwa.
Eweliri ọnọdụ ihu igwe na-enyere onye na-elekọta aka ịhụ mkpu site na anya.
Ejiri batrị (3-AA adịghị etinye) ma ọ bụ ihe nkwụnye ọkụ AC (AC-05).
Obere batrị ngosi.
Nyochaa ọ bụghị na ngosi ngosi.
Nọọkọta nọọkọta nọọlụ - Pịnye n'ime usoro nọọkọta nurse.
Otutu otiti mkpu.
Na-arụ ọrụ na akwa ikuku ma ọ bụ oche oche sensọ, na teepu ikuku, na PIR-01 Predictive Motion Infrared.
Na-arụ ọrụ na:
Nzuzo 4467 1 Echiche Taa